လိင်မှုဆိုင်ရာနှင့် ဦး နှောက် - ညစ်ညမ်းသောသင်၏ ဦး နှောက် - ဆောင်းပါးများ
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဦး နှောက်ဆိုင်ရာဤအပိုင်းသည်ပထမတစ်ချက်အနေဖြင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်နွှယ်မှုမရှိသောအကြောင်းအရာများကိုအကျယ်တဝင့်ဖော်ပြရန်အကျယ်ချဲ့ထားသည်။ ဆုရရှိသည့် circuit ၏ sensitivity နှင့် plasticity အပေါ်လိင်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုကိုစူးစမ်းသောကြောင့်ဆောင်းပါးအားလုံးသည်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။
'လိင်စိတ်တိမ်းညွတ်မှုကို' ပြောင်းပြန် 'လိင်အရသာ' နှင့်ခွဲခြားရန်အချိန်တန်ပြီ
Researchers ပြခဲ့ကြ နို့တိုက်သတ္တဝါများအေးစက်နိုင် (နှင့်တခါတရံ reconditioned) အံ့သြစရာလွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူမိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုကိုထိန်းညှိဖို့။
နောက်တစ်ခါတစ်စုံတစ် ဦး က“ ကလေးများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ပြီးမည်သူမျှသူတို့၏လိင်ရွေးချယ်မှုကိုကန့်သတ်မထားသင့်” ဟုငြင်းခုံသည်ကိုနောက်တစ်ကြိမ်ကြားသည့်အခါပြင်းထန်သောလိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုသည်နုပျိုသောလိင်၏မူလလမ်းကြောင်းကိုအံ့သြစရာကောင်းသောနည်းလမ်းများဖြင့်ပြောင်းလဲပစ်နိုင်သည့်အစွမ်းရှိသည်ဟုသုတေသီများကသတိပေးသည်။
သာ. ကြီးမြတ်ရောငျ့ရဲရှာဖွေနေပါသလား ကိုယျတျော၏ဦးနှောက်ကိုငါသိ၏။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်သင့်ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျြောအပါးနှင့်သင့်လက်တွဲဖော်နှင့်အတူချိတ်ဆက်မှုကိုလျှော့ချစေခြင်းငှါအဘယ်ကြောင့်အပေါ်တစ်ဦးကဦးနှောက်-သိပ္ပံရှုထောင့်။ ယဉျ porn အသုံးပြုသူများအတွက်တစ်အလေ့အထတစ်ခုဖြစ်သည်ကတည်းကဤဆောင်းပါးကိုသင့်ရဲ့ပြန်လည်နာလန်ထူဖို့အထောက်အကူဖြစ်နိုင်သည်။
သင်ကလိင်ပြီးနောက် Chaser လိုအပ်ပါသလား
“ သင်ပိုမိုခြစ်ခြစ်လေလေ”” ဟူသောအယူအဆသည်အော်ဂဇင်ကိုတစ်ခါတစ်ရံတွင်အသုံးပြုသည်။ ဆုလာဘ်တိုက်နယ်၏ဒီဇိုင်းသည်လှုံ့ဆော်မှုခံရသောအခါစိတ်အားတက်လာစေသည်။ သင့်ရဲ့စစ်မှန်သောလိင်စိတ်ကဘာလဲ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘ ၀ များတွင်ပိုမိုစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်မျှတမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သူများ၏မှတ်ချက်များပါရှိသည်။
အမြိုးသမီးမြား: orgasm သင်ဟာတစ်ဦးက Hangover Give ပါသလား?
သုတေသနအမျိုးသမီး postcoital သံသရာရှိနေဆဲဟုထုတ်ဖော်ပြသ
ယခုလဂျာမန်သုတေသီများကအော်ဂဇင်နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်အမျိုးသမီးများအတွက် prolactin ဒီဂရီများပြားလာခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ဒါကအမျိုးသမီးတွေရဲ့သဘောထားတွေကိုအရောင်ခြယ်နေတာလား။
လိင်နှင့်စာရိတ္တ: ယှဉ်ပြိုင်အာရုံခံအကြားတစ်ဦးက Debate
နယူးသုတေသနကိုယ်ကျင့်တရားဆုံးဖြတ်ချက်များကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုမိုမြင့်မားဆင်ခြင်တုံတရားဦးနှောက်နှင့်ဖွဲ့ကြသည်မဟုတ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ထိုသို့သောဆုံးဖြတ်ချက်များသည်အခြားတိရိစ္ဆာန်များနှင့်ဝသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေးဆုလာဘ် circuitry အားဖြင့်ချိန်တွယ်နေကြသည်။ စွဲအရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားသံလိုက်အိမ်မြှောင်ယိုယွင်းနေ, အကျိုးကိုဆားကစ်အတွက်ဖျက်ဆီးကစား။
Intriguingly, အပျြောအပါးစင်တာနှင့်အပြုအမူကြောင့်လမ်းညွှန်များဘဝအတွေ့အကြုံများအားဖြင့်ထက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဗီဇများကအများအားဖြင့်ထုဆစ်နေကြတယ်။ ဤသည် dopamine function ကိုကျခွငျးမရှိအမွေဆက်ခံနိုင်ယခင်ယူဆချက်ကိုစိန်ခေါ်။ -ရှင်ပေါလုရမှာပါ, MD, Ph.D
သင်ကြည့်နိုင်သည့်အတိုင်းလိင်စွဲခြင်းနှင့် ဦး နှောက်သည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုထက်မက ပို၍ ရှိသည်။
သင်ကလိင်ပြီးနောက်တစ် Chaser လိုအပ်ပါသလား (2010)
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Fantasy: အဆိုပါပိုသင့်အနေဖြင့်ပိုမို Scratch သင်ဟာယားယံ (2010)
အမြိုးသမီးမြား: orgasm သင်ဟာတစ်ဦးက Hangover Give ပါသလား? (2012)